रामायणका हनुमान दारासिँह रहेनन् | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← सुगुरले लिङ्ग टोक्दा खुत्रुकै
साउन १ देखि नेपालभर लोकल कल →
मुम्बई, असार २८ (एजेन्सी) – कुस्तिबाजबाट कलाकार बनेका दारा सिँहको आज बिहान निधन भएको छ । एकहप्तादेखि जीवन-मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेका उनको आज बिहान सवा सात बजे निधन भएको हो । पारिवारिक डाक्टर आर. के अग्रवालले दारालाई बिहान मृत घोषित गरेका थिए ।
परिवार सुत्रले जनाए अनुसार आज दिउसो २ बजे उनको अन्तम यात्रा निकालिने छ । चर्चित धारावहिक श्रृखला रामायणमा हनुमानको भूमिका निर्वाह गरेका उनी स्वस्थरुपमा फर्किन कठिन भएपछि बुधबार राति अस्पतालबाट उनलाई आफ्नै घर ल्याइएको थियो ।
८४ वर्षीय उनको दिमागमा रगतको प्रवाह रोकिएपछि उपचारका लागि कोकिला बेन अस्पताल लगिएको थियो । उनको अवस्था सुधार हुने सम्भावना क्षीण भएको चिकित्सकहरुले घर लैजान सल्लाह दिएका थिए । ४ दिन अघिदेखि उनलाई आइसियुमा राखी उपचार गरिएको थियो । ‘हामीले एमआरआइ गरायौं। उनको मगजमा अक्सिजन सप्लाइ हुन सकेन,’ डा. राम नारायणले भनेका थिए ।
चिकित्सकहरुले उनका लागि कुनै पनि औषधीले अव काम नगर्ने बताइएका थिए । चमत्कार हुने हो भनेमात्र हो अन्यथा कुनै पनि संजिवनीले उनलाई बचाउन नसक्ने नारायणको भनाई थियो ‘उनी कोमामा पनि निदाइरहेका जस्ता छन्,’ नारायणले भने।